macOS zvakare iri panjodzi kune ichangobva kuwanikwa Sudo bug | Linux Vakapindwa muropa
Kwekupedzisira Ndira 27, svondo rapfuura nhasi, takadaro echo yekusagadzikana muSudo iyo yakabata masisitimu anoshanda eLinux. Ndozvatakanzwisisa, nekuti ndiwo marondedzerero avakaita, kubva kune ruzivo rwepamutemo, kwavakataura Ubuntu, Debian naFedora sehurongwa hwakakanganiswa. Ivo zvakare vakataura kuti pamwe zvakakanganisa kumwe kugoverwa futi, uye nhasi tadzidza kuti pakati peanokanganisa masisitimu anoshanda kune mamwewo akavakirwa paUNIX, senge BSD ne macOS of Apple.
Kushushikana kwakawanikwa neQualys, kambani yakavakirwa muCalifornia, kana kunyanya vaive ivo vakakwanisa kushandisa kushushikana kwaivepo kwemakore angangoita gumi. Vashandisi veLinux vakatochengetedzwa, asi vashandisi veMacOS vachiri vasina. Izvi zvakasimbiswa naMateu Hickey, anobva kuHacker House, achivimbisa kuti iyo sudo kutambura zvinokanganisawo hurongwa hunoshandiswa neMacs.
Zvakanyanya kuoma kugadzirisa pane macOS pane paLinux
CVE-2021-3156 zvakare zvinokanganisa @Manzana MacOS Big Sur (isina kuburitswa pari zvino), unogona kugonesa kuburitsa nyaya yacho nekumiririra Sudo ku sudoedit uyezve kukonzeresa murwi kufashukira kukwidziridza ropafadzo dzemumwe kuna 1337 uid = 0. Kunakidzwa @ p0sixninja pic.twitter.com/tyXFB3odxE
- Hacker Anoshamisa? (@hackerfantastic) February 2, 2021
CVE-2021-3156 zvakare inokanganisa Apple's MacOS Big Sur (parizvino isina kurongwa), unogona kugonesa kushandisa dambudziko nekufananidza kubatanidza Sudo ne sudoedit uyezve nekuita murwi kufashukira kuyera ropafadzo kubva kune imwe kusvika 1337 uid = 0. Kunakirwa @ p0sixninja.
Kubva pane zvatinogona kuverenga mu Nhoroondo yeHickey ye Twitter, ndizvo imwe yeanonyanya kukanganisa bugs muUNIX / Linux nhoroondosezvo yaibata Linux uye inoramba ichikanganisa macOS, Solaris, uye mamwe asiri-glibc masisitimu. Uye nezve Apple's system, vagadziri vanogona kugadzira chigamba, asi zvinogona kutora nguva kuti kambani ishandise kune yayo inoshanda sisitimu. Inobata inosvika macOS 11.2.
Kune vamwe vagadziri, se oberaver, vanoona zvichisekesa izvo, kunyangwe ivo vachiziva kuzvigadzirisa vega, havagone kuzviita nekuda kwekodzero dzevamwe, saka ivo vanofanirwa kumirira Apple kuti isunungure yekugadzirisa kugadzirisa bug iyo muLinux yakagadziriswa kwevhiki. Uye ndicho chimwe chezvakanakira kushandisa software senge iyo yatinoshandisa kutenderedza pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Sudo kudzvinyirira inobatawo macOS, uye haisati yataridzirwa
Minetest 5.4.0: kuburitswa nenhau dzevadi veMODs